Nezvedu - Nanchang Weiti Technology Co, Ltd.
Tine yakakwana yekugadzira tambo uye nzvimbo yekusangana nekwanisi yekugadzira uye yedu nyanzvi yekuongorora timu kune yakasimba yemhando control.OEM & ODM sevhisi inowanikwa uye yedu dhizaini timu inogona kukubatsira iwe kugadzirisa yako yakavanzika chitaridzi. Yedu yekutengesa timu ichave maawa makumi maviri nemana achipindura mibvunzo yako uye kugadzirisa matambudziko ako. Zvekutakura, isu tine chibvumirano neDHL, FEDEX, UPS, EMS, SF, TNT yemari iri nani yekutakura uye garandi yekufambisa.
Hunhu ndiyo musimboti, sevhisi ndiyo injini. Isu tinotarisana nekupa vatengi vedu zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pamwe neyakanakisa masevhisi.Zvose zvigadzirwa zvakarairwa kubva kwatiri zvinonakidzwa nekudzoka kana kudzoreredzwa mukati memazuva manomwe ekushanda kana paine chero matambudziko ehunhu uye kutakurwa kukuvara.Panguva imwecheteyo, yedu yekutengesa-timu ino zvirokwazvo gadzirisa dambudziko rako mukati memaawa makumi maviri nemana.
Parizvino, isu takashandira vatengi vanobva kunyika makumi mashanu pasi rese, uye makumi masere muzana akapa chiyero chepamusoro chekucherechedzwa nekutenda chigadzirwa chedu uye sevhisi, uye vakati vacharamba vachichengetedza hukama hwakabatana pamwe nesu. Pakati pavo, vatengi vedu vanosanganisira vatengi vekambani, vagoveri, zvitoro zvepamhepo uye zvitoro zvepamhepo, nezvimwe.
Takazvipira kushandira vatengi vedu uye nekupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, tinotarisira kufambira mberi uye kukura pamwe nevatengi vedu. Isu tinodawo kuchengetedza hurefu uye hwakagadzikana kudyidzana hukama nevatengi vedu. Kuburikidza nekuenderera mberi nekuvandudzwa kwehunhu hwechigadzirwa uye sevhisi, tinogona kuita kuti vatengi vedu vanzwe zviri nyore uye kuve nechokwadi chekushandira pamwe nesu, nokudaro tichiwana yekuhwina-kuhwina mamiriro. Pamatambudziko evatengi, isu tinopa kubvunza uye mhinduro nekukurumidza sezvazvinogona, kuitira kuti vatengi vasazonetseke.
Eyelash Kuwedzeredzwa, mink lashes, lipgloss, Vatengesi ve Eyelash, Ziso Lashes, eyeliner,